Mpanamboatra Jiro Led Strip Matihanina any Shina
Lightstec® dia iray amin'ireo orinasa mpamokatra jiro LED lehibe indrindra any Sina. Manolotra serivisy tokana izahay ao anatin'izany ny jiro LED linear, ny mombamomba ny aluminium, ny jiro LED, ny jiro neon flex, ny mpamily LED, ny sensor, ny jiro kabinetra. Raha te hividy jiro LED avy any Shina ianao, Pls mifandraisa aminay!
Mangataha katalaogy farany
Mpamatsy jiro LED Strip ambony indrindra any Shina
Lightstec® dia orinasa mpanamboatra jiro jiro LED matihanina any Shina. flexible SMD Led strip jiro, profil aluminium nitarika, nitarika hazavana Linear, jiro kabinetra, nitondra jiro ambany no tena vokatray. Mifantoka any Azia, Eoropa, Afrika Atsimo, Oseania, Amerika Avaratra tsena nandritra ny 13 taona mahery. Ny vokatra mitondra antsika dia manana fanamarinana CE / ROHS ho an'ny tsena Eoropeana ary fanamarinana FCC / IC ho an'ny tsenan'i Amerika Avaratra. Henoy tsara ny fangatahanao, ataovy ny baiko araka ny fangatahanao, ny serivisy dia zava-dehibe toy ny vokatra. Tongasoa eto amin'ny orinasa Lightstec®!
Fanamboarana Jiro LED rehetra
Lightstec dia hanome anao ny vahaolana jiro LED tsara indrindra
Maherin'ny 100+ karazana SMD flexible led strip lights.White, fotsy mafana, fotsy voajanahary, CCT turnable, tsipika azo ampiasaina, RGB sy RGBW strips dia misy.
silisiôma jiro neon flex, Izany dia mampiasa silisiôma extrusion famolavolana teknolojia vaovao. Arovy ny jiro LED hatramin'ny IP67. Ary ampiasaina be dia be ho an'ny famolavolana stylish anatiny sy ivelany.
Ny profil aluminium malaza, ny extrusion aluminium, ny fantsona aluminium ho an'ny jiro LED. Mamorona vokatra jiro tsara tarehy. Tongasoa eto amin'ny kaomandy natao manokana.
Ny birao dia nitarika jiro tsipika, rafitra jiro tsipika, pendant, jiro mihemotra, famolavolana maimaim-poana miaraka amin'ny tanjona hanome vahaolana tsara indrindra ho an'ny tetikasanao.
Jiro mipetaka COB ao anatin'izany ny jiro fotsy, fotsy mafana, fotsy voajanahary tsy misy jiro cof. Misy koa ny tady RGB COB sy ny tady CCT COB.
Ny jiro LED ara-barotra ao anatin'izany ny jiro mihemotra, ny jiro mipetaka amin'ny tany, ny jiro midina. Ampiasao ny marika COB ao anatin'izany ny Philips, Osram, Citizen, sns.
Fampiasana jiro LED ara-barotra ho an'ny birao, toeram-pivarotana, efitrano fampisehoana. Dali dimmable, 0-10v dimmable, fiovana CCT dia misy.
Manamboara Linear Light
Manolotra serivisy fanao mahazatra amin'ny jiro LED izahay.Tsy maninona na boribory, efamira, na endrika hafa amin'ny hazavana tsipika. Omeo anay ny rakitrao amin'ny CAD. Hanome tolotra tsara ho anao izahay.
OEM namboarina fanompoana dia tonga soa, our orinasa afaka mamolavola vaovao Led PCB, CCT manokana, CRI avo, ary famolavolana extrusion profil LED vaovao.
Lightstec dia manome antoka 3 taona ho an'ny jiron'ny led flexible rehetra, ny mombamomba ny aluminium ary ny vokatra jiro LED. Orinasa jiro azo antoka!
Lightstec mifantoka amin'ny kalitao avo lenta SMD flexible led jiro, nitarika aluminium profil sy nitarika tsipika jiro, nitarika kabinetra hazavana mihoatra ny 10 taona.
Ny raharaham-barotra lehibe dia avy amin'ny baiko kely. Manaiky baiko kely izahay, baiko tetikasa manokana. Tsy maninona ny jiro LED iray metatra na ny profil LED iray.
Momba ny Lightstec®
Lightstec® dia ambony Jiro LED Strip, LED Linear jiro rafitra, LED Aluminum Profile manufacturer who founded in 2008. We have our own factory and R&D Dept. Located in Guangdong, China. Near Hong Kong, Shenzhen and Guangzhou.
Izahay dia mifantoka indrindra amin'ny famolavolana, famokarana ary fandefasana vokatra jiro LED avo lenta. Ny vokatra LED rehetra dia novokarin'ny ekipa mpanao asa tanana mahay ary manamboatra avy amin'ny fitaovana tsara indrindra misy. Ny tapany vita tsirairay dia nojerena tsara sy fonosina mba hahazoana antoka fa ny vokatra avo indrindra amin'ny mpanjifa ihany no alefa. Ny kalitao sy ny famolavolanay dia tohanan'ny serivisy mpanjifa feno fiheverana.
Ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa no tanjonay voalohany ary hiezaka mafy izahay mba handraisana ny fangatahana rehetra sy hanompoana ny mpanjifa amin'ny ambaratonga avo indrindra. Izahay dia hanompo anao amin'ny ambaratongam-pitsaboana mitovy sy vokatra tsara. Tongasoa eto aminaor orinasa!
Fantaro bebe kokoa momba anay
Fampisehoana fampirantiana jiro
Inty izahay Lighting Fair
Lightstec® dia mpamatsy jiro LED matihanina matihanina. Asehoy ny jiro LED tsara kalitao, nitarika profil aluminium, ary nitarika jiro tsipika tao amin'ny Hong Kong Autumn Lighting Fair.
Ny vokatray dia ankatoavin'ny CE/FCC/ROHS. Ary UL / ETL / SAA nitarika mpamily.
Mifandraisa aminay raha mitady a Mpanamboatra jiro LED Shinoa.
Andao hihaona amin'ny fampisehoana jiro manaraka.
Lightstec® ao amin'ny Hong Kong International Lighting Fair 2019
Lightstec® ao amin'ny Hong Kong International Lighting Fair 2018
Lightstec® ao amin'ny Hong Kong International Lighting Fair 2017
Fampiharana famolavolana misimisy kokoa...
Amin'ny maha iray amin'ireo matihanina tsara indrindra nitarika mpamatsy jiro jiro, Lightstec dia manana mpanjifa maro mampiasa jiro jiro eran'izao tontolo izao. Misaotra amin'ny mpanjifa mampiasa Lightstec® nitarika jiro tsipika, profil aluminium nitarika, ary hazavana tariby nitarika mba hamoronana tontolo jiro mahagaga. Mahira-tsaina izy ireo, miasa mafy ary tia ny jiro. Mampiasa izy ireo jiro nitarika amin'ny jiro birao, jiro amin'ny toeram-pivarotana, jiro ao an-trano, jiro ara-barotra, jiro sekoly, jiro hopitaly, jiron'ny lobby orinasa, jiron'ny efitrano fandraisam-bahiny, jiro trano fisakafoanana, jiro hotely, jiro amin'ny zaridainam-pilalaovana, jiro kafe, sns. Hevitra famolavolana jiro mahagaga! Misaotra antsika mpiara-miasa rehetra!
Led Linear light ho an'ny tranombakoka
Led Linear jiro ho an'ny sekoly
Led Linear light ho an'ny toeram-pivarotana
Led Linear jiro ho an'ny birao
Taratasy fanamarinana ny jiro LED
Fahazavana LED antoka kalitao
Ny kalitao Led Light dia tena zava-dehibe amin'ny orinasa sy ny tetikasa. Mila loharanon-jiro LED avy amin'ny mpanamboatra manana antoka tsara kalitao ianao. Ary mila serivisy tsara hanohanana ny orinasan-jiro ny mpamatsy jiro LED.
Blaogin'ny jiro LED matihanina
Vakio kely, fantaro bebe kokoa alohan'ny hividianana Jiro Led
Blog About|Led Strip Light|Led Aluminium Profile|Famatsiana herinaratra LED|Sourcing Led Light|Led Light Video|Led Light Report|
Led Aluminum Profile Torolàlana ho an'ny mpampiasa
Amboary ny jiro LED anao manokana ao amin'ny orinasa
Torolàlana Famolavolana farany ho an'ny Hevitra Jiro Led Strip
Inona ny mari-pana loko LED azonay atolotra
Torolàlana famolavolana farany 2019 ho an'ny hevitra momba ny mombamomba ny aluminium
Led Linear fahazavana aluminium profil mpividy mpitari-dalana
Ahoana no hividianana jiro LED avy any Chine? (Sourcing Guide in 2021)
Torolàlana momba ny fividianana jiro LED (fanavaozana 2021)
Ny tsenan'ny hazavana lehibe indrindra eran-tany: Guzhen
Jiro LED tsy tantera-drano, IP20, IP33, IP55, IP65, IP67
Ahoana no hanamaivanana ny jiro LED? (Ultra Dimmable Guide)
Nahoana no misafidy jiro LED Lightstec®?
Inona no atao hoe jiro led?
Raha mitady mpanamboatra jiro LED ianao ary mividy jiro LED avy any Shina. Mila mahafantatra hafatra vitsivitsy momba ny jiro LED ianao.
Araka ny hitanao amin'ny sary, ny jiron'ny led dia flexible circuit board (PCB) napetraka LED sy fanoherana eo ambonin'ny tany. Misy kasety 3M ao ambadiky ny PCB. Azonao atao ny mipetaka amin'ny faritra rehetra madio sy fisaka. Mampiasa jiro izy io ary misy loko isan-karazany. Ary izao dia manana COB mitondra hazavana, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany.
Nahoana no misafidy Lightstec® Jiro LED strip?
Mampiasa fitaovana avo lenta avy amin'ny Shenzhen nitarika orinasa jiro ary mifehy ny fizotran'ny kalitao amin'ny fomba hentitra.IQC fanamarinana ara-pitaovana, fanamarinana feno SMT, fanamarinana fametahana, fanaraha-maso kalitao IPQC, fanaraha-maso ny kalitao, fanaraha-maso ny fahanterana, fandinihana alohan'ny famonosana, fanamarinana OQC alohan'ny fanaterana. tonga soa sourcing led strip jiro avy aminay!
Marika EPISTAR chips
Bracket varahina tsara ho an'ny fanalana hafanana
High lumen Output, mitazona mitovy BIN mitovy loko hafanan'ny
2-ounce varahina lafiny roa PCB
Varahina nanakodia malefaka kokoa
Ny conductivity elektrika tsara kokoa sy ny fanaparitahana hafanana
Kasety 9080A 3M tany am-boalohany kalitao
Toerana tsara hafanana, tsy mora midina
4. Fametahana fametahana
Mametaka ara-tontolo iainana
Ny fanoherana elektrika kely sy ny conductivity elektrika tsara
Lightstec® Ny tombony amin'ny hazavana LED:
1. Length cuttable
Led strip jiro dia cuttable 3leds (DC12V) sy 6leds (DC24V). Azonao atao ny manapaka ny halavany tianao
Led strip light dia malefaka. Afaka miforitra hatramin'ny 180 degre. Saingy mila mikarakara ny fitarihana sy ny fanoherana ianao. Izany dia ahafahanao manampy hazavana amin'ny toerana sarotra apetraka.
3. Misy loko
Ny LED dia azo amboarina amin'ny loko samihafa. Ary loko manova safidy
3. Habe kely
Azonao atao ny manapaka kely ny jiro led strip. Izany dia ahafahanao mamolavola an-kalalahana ny tetik'asa jironao nefa tsy manahy momba ny fepetra takian'ny habaka.
Ny lamosin'ny jiro LED dia manana kasety 9080A 3M tany am-boalohany. Izany dia ahafahanao mifikitra amin'ny hazavana mipetaka amin'ny faritra mazava sy fisaka.
5. azo ahena
Ny jiron'ny jiro dia mety ho an'ny Triac dimmer, 0 / 1-10V dimmer, Dali dimmer.
6. Fiarovana IP
Afaka manolotra lakaoly silika IP55 tsy tantera-drano, fantsona silikon IP65 tsy tantera-drano ary lakaoly silika IP67 famenoana fantsona silisiôma.
7. namboarina manokana
Manolotra habe namboarina, led, mari-pana loko, wattage, volt, serivisy CRI izahay.
Fa maninona no misafidy ny profil aluminium LED Lightstec®?
Inona no led aluminium profil?
Raha te hividy profil aluminium LED avy any Shina ianao, mila mahafantatra tsiambaratelo sasany amin'ny fantsona aluminium LED ianao.
Ny profil aluminium LED dia novokarin'ny metaly aluminium. Amin'ny fampiasana bobongolo samihafa dia afaka mamoaka karazana profil aluminium samihafa. Amin'ny ankapobeny ho an'ny jiro mampiasa profil aluminium mitondra ao anatin'izany ny mombamomba, diffuser, satroka farany, tariby fampiatoana. tonga soa sourcing led aluminium profil avy aminay!
Nahoana no misafidy ny mombamomba ny aluminium LED Lightstec?
Lighstec dia mpanamboatra profil aluminium mitarika matihanina. Mampiasa fitaovana avo lenta izahay mba hanaovana profil aluminium. Manana mihoatra ny 100+ karazana led aluminium profil izahay. Izahay dia manana tafo mipetaka, Recessed, Pendant, Corner, Round, Stair, ary profil aluminium ledable. Mety hifanaraka amin'ny tetikasanao momba ny famolavolana jiro samihafa izany.
Mampiasa 6063-T5 aluminium extrusion.Structure matanjaka
Fanalana hafanana tsara
Misy loko isan-karazany, volafotsy, mainty, fotsy
2. fonony PMMA
Milky diffuser sy sarony mangarahara misy
3. Famaranana satroka
Satroka faran'ny aluminium avo lenta sy satroka farany plastika misy
4. Clips sy tariby fampiatoana
Ny clips sy ny tariby fampiatoana dia mety amin'ny fametrahana samihafa.
Marika Led Chips
Lightstec amin'ny fampiasana puce LED malaza dia manome antoka fa amin'ny kalitao avo lenta ny jiro.
TOROHEVITRA HO AN'NY PRODUCTS LED
Anton Nota| Jiro LED raharaham-barotra
Manao jiro kabinetra mitondra any UK izahay. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa 5 taona, fantatray fa Lightstec dia mpanamboatra jiro LED azo itokisana ao Shina. Afaka manolotra loko mitovy ihany izy ireo jiro mitondra jiro amin'ny baiko rehetra. Lightstec dia manana andian-jiro mitondra hazavana. Toy ny SMD3528 nitarika hazavana, SMD5050 nitarika hazavana, SMD2835 nitarika hazavana, SMD5630 nitarika hazavana, SMD3014 nitarika hazavana, SMD2216 nitarika hazavana, azo havaozina ny jiro LED, CCT turnable LED strip ,jiro LED tsy tantera-drano.Ny fanaraha-maso tsara dia aoka isika eo anoloan'ny mpanjifa nahazo voninahitra bebe kokoa. Misaotra anao!
Ary Lightstec dia manana lahatsoratra tsara mampahafantatra anao Ahoana no hividianana jiro LED avy any Shina?
Roland Vera| Tetik'asa jiro LED
Mividy jiro led flexible aho ary profil aluminium nitarika avy amin'ny Lightstec imbetsaka. Manana maro isika Hevitra mazava tsara LED strip avy amin'ny Lightstec. Vita tsara izany araka ny fangatahako. Indraindray, ny tetikasa iray dia mila kojakoja maivana LED maro, toy ny connector led, led sensor switch, led cabinet dimmer controller, silicone tube ho an'ny tantera-drano. Famolavolana manokana, marika OEM, miasa tsara daholo. Heverintsika ho mpamatsy jiro LED tsara i Lightstec.
Lisa | Mpividy jiro LED
Matihanina notarihin'i Espaina izahay mpaninjara jiro, manana dimampolo taona niasana ny orinasa. Ny mpanjifanay maro dia mampiasa jiro LED ao amin'ny kabinetra an-dakozia, fiara, efitrano fandraisam-bahiny, tohatra, birao, sns. Ary maro amin'izy ireo no mila jiro LED Accessories. Tena faly ny mahita Lightstec, manome antsika serivisy matihanina sy vokatra tsara izy ireo. Raha mila jiro LED ambongadiny avy any Shina ianao, Lightstec dia iray amin'ireo mpanamboatra jiro LED tsara indrindra any Shina.
Tim | Mpividy jiro LED
Manao tetikasa maro ho an'ny toeram-pivarotana, efitrano fampirantiana orinasa any Eoropa izahay. Indraindray ny tetikasa dia mila vokatra fanamboarana maro. toy ny jiro mitondra jiro SY profil aluminium nitarika. Habe samihafa, wattage samy hafa, kojakoja LED samihafa. Lightstec dia mpanamboatra fitarihana matihanina. Mandoa faharetana amin'ny baiko izy ireo. Na inona na inona ho an'ny aluminium heatsink, vokatra extrusion aluminium nitarika, saron'ny diffuser, satroka farany, ary kojakoja fametrahana ho an'ny jiro LED. Afaka manao izany tsara izy ireo.
Miezaka mafy izahay hanatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ary hahatsapa ny fiaraha-miasa mahomby amin'ny mpanjifanay. tonga soa sourcing led jiro avy aminay!
Mpanamboatra jiro LED amin'ny dokam-barotra sy takelaka famantarana
LED jiro mpanamboatra fiara
Jiro LED mpanamboatra jiro acrylic, jiro aluminium linear
Mpampiasa jiro LED amin'ny toeram-pivarotana lehibe sy departemanta
LED jiro mpanjifa manokana amin'ny toeram-pivarotana, trano fandraisam-bahiny, birao, klioba, KTV, sns
Mpanamboatra jiro LED amin'ny haingon-trano
Jiro LED ho an'ny mpampiasa DIY
Jiro LED mpivarotra jiro sy jiro
Ampidino ho PDF ny katalaoginay farany
Mba hitsitsiana fotoana anao dia nanomana katalaogin'ny PDF ihany koa izahay. Azonao atao ny manamarina ny vokatray jiro LED farany indrindra. Avelao fotsiny ny mailakao dia ho azonao avy hatrany ny katalaogy PDF.